Hoho. Not'ad — Steemit
အိပ်ပျော်ခြင်း, စွမ်းအင်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်ရရှိလာတဲ့။ ကယ်ရီသူမပထမဦးဆုံးတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ပြားများအတွက်ဆေးရုံတင်ခံရပြီးနောက် 2001 ခုနှစ်တွင်အခြေအနေနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်,
bipolar II ကိုစိတ်ကျန်းမာရေး (NIMH) ၏အမျိုးသား
Institutes သည်နှင့်အညီ, စိတ်ခံစားမှုစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ်တို့အကြား vacillate ကြောင်းအစွန်းရောက်စိတျအပွောငျးအလဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
Pop ဂီတကြယ်ပွင့်ရိုင်ယာကယ်ရီတိတ်ဆိတ်နီးပါးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုပြီးနောက်, စိတ်ကြွ II ကိုရောဂါနှင့်အတူသူမ၏ "ရုန်းကန်မှုများ" ဖော်ပြခဲ့တယ်။ "ငါသည်စိတ်ကြွ II ကိုဖရိုဖရဲနဲ့ငါ့ရုန်းကန်မှုများဆွေးနွေးခြင်းအဆင်ပြေတယ်ဘယ်မှာငါအခုချက်ချင်းပဲတကယ့်နေရာကောင်းများတွင်ပေါ့" ဟုအဆိုတော်ပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "ကျနော်တို့အမည်းစက်တစ်ဦးတည်းဘာမှမှတဆင့်သွားလူမြိုးမှရုတ်သိမ်းသည်အဘယ်မှာရှိရာအရပျမှရနိုင်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အထီးကျန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သတ်မှတ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးငါကငါ့ကိုမသတ်မှတ်သို့မဟုတ်ငါ့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါရန်ငြင်းဆန်။ " သူတို့မဆင်မခြင်ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူလှုံ့ဆျောနှင့်ပင်ဆေးရုံတင်ကုသရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်အစွန်းရောက်ကြာရှည်စံချိန်တင်မြင့်တက် - - စိတ်ကြွငါမတူဘဲ, စိတ်ကြွ II ကိုပုံမှန်အား Manic ဖြစ်စဉ်များမပါဝင်ပါဘူးဒါပေမယ့်နေဆဲစိတျအပွောငျးအလဲကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်
ဒါပေမယ့်သူမပထမဦးဆုံးမှာ "ကယုံကြည်ချင်ကြဘူး" လူတွေကသို့ပြောသည်။ နှင့်ကမ္ဘာနှင့်အတူသူမ၏အဖြစ်မှန်မျှဝေဖို့အဆင်သင့် - တစ်ခက်ခဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းပိုင်းပြီးနောက်, အနုပညာရှင်သူမကဆေးကုသမှုအတွက်ယခုကပြောပါတယ်။ "မကြာသေးခင်ကအထိငါငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုဖော်ထုတ်မယ်လို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့နေထိုင်ခဲ့" ကယ်ရီပြည်သူ့သို့
ပြောသည်။ "ဒါဟာသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ကျနော်ရိုးရိုးတော့ဘူးကြောင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများလွန်းမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါငါ့ကိုလှည့်ပတ်အပြုသဘောကလူဝတ်နဲ့ကျွန်မပြန်ချစ်ဘာလုပ်နေလဲတယ်, ဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုခံယူ - ။ သီချင်းတွေကိုရေးသားခြင်းနှင့်ဂီတအောင် " အများပြည်သူသွားမှာတော့ကယ်ရီမကြာသေးမီက NBA ကြယ်ပွင့်ကီဗင်မတ်ေတာသနှင့်မော်ဒယ် Chrissy Teigen အပါအဝင်, သူတို့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီတဲ့သူနာမည်ကြီးတွေ၏အုပ်စုတစုကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
Pop get kyaal pw int rine yar kaalre tatesate neeparr saalhcunhait nhaithku pyeenout, hcatekyaw II ko rawgar nhaint aatuusuumeat " ronekaanmhumyarr" hpawpyahkae taal . " ngarsaihcatekyaw II ko hparohparell nae ngar ronekaanmhumyarr swaynwayhkyinn aasainpyay taal bhaalmhar ngar aahkuhkyethkyinn pell t k ae nayrar kaungg myarrtwin pot" hu aasotaw pyishu shoetpyawwsai . "
kyanawthoet aamaeehcaat tait u taee bharmha mhat saint swarr luumyaoe mha rotesaim saiabhaalmhar shirarar pya mha r nine myahaaw laint mipartaal . darhar mayone nine loutaaung aahteekyaan hcay ninepartaal . darhar sain saatmhaathphoet shisai parbhuu ngar k ngarko m saatmhaat shoetmahote ngarko hteinhkyaote hkwin pyu par raan ngyinnsaan . " bipolar II kohcatekyannmarrayy (NIMH) eataamyoesarr Institutes sai nhanganye, hcatehkanhcarrmhu hcanhkyanetain myinttaat hkyinn nhaint nainthoetaakyarr vacillate kyaungg aahcwannrout hci tya aapwayarngyaaalell hpyang swinpyin lakhkanar har hcate kyannmarrayyaahkyayaanay hpyitparsai . suuthoet masainmahkyin darmhamahote aantararalshitae aapyuaamuu lhuan syaww nhaint pain sayyronetain kusaraan loaaut nineparsai dar kyount aahcwannrout kyaarshi hcanhkyanetainmyinttaat - - hcatekyaw ngar matuubhell, hcatekyaw II ko ponemhaanaarr Manic hpyithcainmyarr m parwain parbhuu darpaymaae naysell hci tya aapwayarngyaaalell k parwain paatsaat hkyinn nhaint aiutpyawhkyinn, hcwmaain nhaint aapyuaamuu sinerar nhaaw int aayhaat rashilartae . kaalre suu m pahtam u sone tait u rote pine nhaint hcatepinesinerar pyetpyarr myarraatwat sayyronetain hkanrapyeenout 2001 hkunhaittwin aahkyayaanay nhang aatuu siliterataal, darpaymaae suu m pahtam u sonemhar " k yonekyi hkyin kya bhuu" luutwayk shoetpyawwsai . nhaint kambhar nhaint aatuu suumeat aahpyitmhaan myahaway hphoetasainsaint - tait hkaathkell puggolrayy lampine pyeenout, aanupanyarshin suumak sayykusamhu aatwat yahku k pyawwpartaal . " makyaarsayyhkaink aahti ngar ngyinnpaal hkyinn nhaint aahteekyaan nhaint taithcone tait u k ngarko hpawhtote maallhoet hcain saat mapyat kyawwatrwan nayhtinehkae" kaalre pyishu shoetpyawwsai . " darhar saalsaung raan nhaint kyanaw roeroe totbhuu kyount m lotesaung nine m ae waan htote waan poe myarr lwann moesaeehtaanhcwar hpyithkaesai . ngar ngarko lha ny paat aapyusabhaw k luu waat nae kyawanm pyan hkyit bharlotenaylell taal, saee kaut hkyinn nhaintkusamhuhkanyuu - . sehkyinntwayko rayysarrhkyinn nhang getaaaung " aamyarrpyisuu swarr mhartot kaalremakyaarsayymek NBA kyaal pw int ke bain maat aytar s nhaintmawdaal Chrissy Teigen aaparaawain, suuthoetrae hcatekyannmarrayy swaynwayraan sonehpyat lite kya pye tae suu narmaikyeetway eat aotehcu t hcu kyamsahchcarkyaneso pwal hpyitsai .
Congratulations @goldbloger3! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :